Pinterest inotenga kuverenga-it-gare gare Instapaper sevhisi | IPhone nhau
Pinterest inotenga kuverenga-it-gare gare Instapaper sevhisi
Picterest ndeye yakasiana social network, kunyange vashandisi vazhinji vasingazvifunge saizvozvo. Chikuva Picterest inotibvumidza kugovana mifananidzo pane akasiyana madingindira kana emunhu mabhodhi. Picterest yakazvarwa kubva papfungwa yekubatanidza munhu wese kuti agovane zvinonakidza zvinhu zvavanowana zuva nezuva, asi zvakare irwo rudzi rwechitoro uko vashandisi vanogona kuturika zvigadzirwa zvavanoda, kunyanya izvo zvavanogadzira ivo pachavo. Kunyangwe pakutanga zvingasakwezva kutariswa, vashandisi vese vanoishandisa vanoramba vachidaro nguva zhinji.
Picterest ichangobva kuzivisa kutengwa kweanozivikanwa Instapaper sevhisi. Zvinoenderana neruzivo rwakaburitswa naPicterest mushure mekutenga kwako, sevhisi ichave ichimhanya sepakutanga pasina shanduko huru mukushanda kwayo. Marco Arment, anovandudza yeakakurumbira Overcast podcast application, akatengesa sevhisi kukambani yeBetaworks, sevhisi yakazopedzisira yave mumaoko ePicterest. Chikwata chiri kuseri kweInstapaper chataura nezvebhurogu rekambani ichivimbisa kuti sevhisi haizoshanduke mune ramangwana:
Yako, wekupedzisira mushandisi uye Instapaper hapana chinoshanduka. Chikwata cheInstapaer chiri kufamba kubva kuBetaworks muNew York City kuenda kuPicterest dzimbahwe muSan Francisco uye ticharamba tichiita Instapaper nzvimbo yakanaka yekuchengetedza nekuverenga zvinyorwa.
Mukuwedzera isu tinogona zvakare kuverenga izvo Instapaper yekuvandudza chishandiso inomira kushanda munaNovember 1. Asi ivo zvakare vanozivisa kuti munguva pfupi inotevera tichakwanisa kunakidzwa nemabasa matsva nekuda kwekubatana pakati pemakambani maviri aya.
Nemakore, Instapaper yabva pakuva chikumbiro chakabhadharwa kuenda mukusununguka zvachose nekuwana kuburikidza newebhu kana kuburikidza nemaapplication akasiyana anowanikwa kune ese maApp uye Android. Parizvino Pocket ndomumwe wevakwikwidzi vayo vakuru, sevhisi yemahara kwese kwatinogona kuchengeta chero mhando yechinyorwa kuti iverenge gare gare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Pinterest inotenga kuverenga-it-gare gare Instapaper sevhisi
Victòria Suller Loriz akadaro
Pindura kuna Victòria Suller Loriz
Primax Electronics ichagadzira mamwe mamamojuru eiyo mbiri kamera yeiyo iPhone 7 Plus
Tsamba dzinobva Kwese Kwese 2 mahara kwenguva yakati rebei